Dowladda Sudan oo isku qaladay Farmaajo iyo Xasan Sheekh | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Sudan oo isku qaladay Farmaajo iyo Xasan Sheekh
Xukumadda Sudan, ee uu hoggaamiyo Cabdullaahi Xamduuk, ayaa si la yaab leh isugu qaladay sawiradda Madaxweynayaal soo maray Soomaaliya.
KHARTUUM, Sudan - Ra’iisul Wasaaraha dalka Suudaan, Cabdullaahi Xamduuk, ayaa dhawaan qadka taleefanka kula xariiray qaar ka mid ah hoggaamiyayaasha geeska Africa, sida Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Jabuuti, Maxamed Cabdullahi Farmaajo, Madaxweynaha mudadii sharciga ahayd ka idlaatay ee Soomaaliya, Salafakir Mayardit, Madaxweynaha South Sudan iyo Raiisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxuuna kala hadlay arrimo la xariira ilaalinta xasiloonida gobolka.
Hayeeshee, Xafiiska Ra’isalwasaaraha Suudaan, ayaa si khaldan u baahiyay sawirka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo lagu dul qoray magaca Maxamed Cabdullahi Farmaajo, kaas oo la xusay in isagaa iyo Xamduuk, uu dhex maray wada hadal dhanka taleefanka ah.
Sikastaba, xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha ee warbaahinta ayaa daqiiqado kooban kadib, dib u tirtiray sawirkii Madaxweyne Xasan, oo ay ku sheegeen inuu yahay Farmaajo, mana jiro wax raalli galin ah oo ay ka bixiyeen ilaa hadda.
Xukuumadaha Khartuum iyo Muqdisho, waxaa ka dhexeeya xiriir diblumaasiyadeed oo soo jireen ah wana labo dal oo ka wada tirsan Dowladha Geeska Afrika iyoo Ururka IGAD, layaaab ayayna shucuubta labada dal ku noqotay in Xaafiiska RW Cabdullaahi Xamduuk, isku qaldo sawirada Farmaajo iyo Xasan Sheekh.